Ny vidin'ny mpanao fiara manerantany dia misondrotra manoloana ireo mpivarotra chip China amin'ny fihenan'ny vidiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny vidin'ny mpanao fiara manerantany dia misondrotra manoloana ireo mpivarotra chip China amin'ny fihenan'ny vidiny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny tsy fahampian'ny puce eran-tany dia nisy fiatraikany ratsy lehibe, nahatratrana ireo mpamily erak'izao tontolo izao. Ny krizy, izay nipoitra tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020 noho ny fahaizany misimisy ao amin'ny famonoana vy sy ny fitomboan'ny fangatahana semiconductors amin'ny sehatra hafa toy ny 5G, dia vao mainka nampitombo ny tsy fahazoana antoka manodidina ny areti-mandringana COVID-19.
Ireo mpaninjara sombin-tsakafo sinoa dia voasazy noho ny fandoavana ny vidiny.
Ireo mpivarotra sambo dia nampiakatra avo 40 heny noho ny vidin'ny fividianana.
Mandoa onitra 388,000 $ ny mpandrindra sinoa.
Ny sampandraharaham-panjakana misahana ny tsena (SAMR) any Shina dia mandoa onitra mpivarotra trondro miisa 2.5 tapitrisa yuan ($ 388,000) noho ny fihenan'ny vidin-javatra ao anatin'ny tsy fahampian'ny semikonduktor manerantany izay manimba mafy ny indostrian'ny fiara manerantany.
Ny onjam-bidy lehibe eto amin'ny firenena dia nampandoavina onitra an'i Shanghai Cheter, Shanghai Chengsheng Industrial ary Shenzhen Yuchang Technologies taorian'ny fanadihadiana, natomboky ny mpandrindra tamin'ny volana aogositra, fa ny mpivarotra chip dia nampisondrotra ny vidin'ny chip ho an'ny fiara hatramin'ny 4000% noho ny vidin'ny fividianana.
"SAMR dia hanohy handinika akaiky ny mari-pahaizana momba ny vidin'ny puce, hanatsara ny fanaraha-maso ny vidiny, ary hanakanana ireo asa tsy ara-dalàna toy ny fanangonana sy fampisondrotana ny vidiny mba hitazomana ny filaminan'ny tsena, ”hoy ny mpandrindra.
Amin'ny tsena misy famatsiana sy fangatahana voalanjalanja, ny tahan'ny markup an'ny mpivarotra automatique automatique dia eo anelanelan'ny 7% sy 10%, hoy ny watchdog. Nasongadin'ny SAMR fa ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia niteraka tahiry fampitahorana teo amin'ireo mpamokatra sy mpamokatra singa, nampitombo ny tsy fifandanjan'ny fangatahana ary nahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Ny tsy fahampian'ny puce eran-tany dia nisy fiatraikany ratsy lehibe, nahatratrana ireo mpamily erak'izao tontolo izao. Ny krizy, izay nipoitra tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020 noho ny fahaizany misimisy ao amin'ny famonoana vy sy ny fitomboan'ny fangatahana semiconductors amin'ny sehatra hafa toa ny 5G, dia vao mainka nampitombo ny tsy fahazoana antoka manodidina ny fahatezerana Areti-mifindra COVID-19.
Nikasa ny hampihenana ny tsindry amin'ny sehatry ny fiara misy ny firenena ny manampahefana sinoa izay voalaza fa mitana ny fiara fahatelo ampitaina manerantany.
Ny indostrian'ny famokarana fiara any Shina, izay lehibe indrindra manerantany amin'ny fiara mandeha amin'ny solika sy ny herinaratra, dia voa mafy noho ny tsy fahampiana manerantany. Raha ny angom-baovao avy amin'ny governemanta, miankina amin'ny importa ny firenena mihoatra ny 90% amin'ny vokatra semiconductor.
Raha ny angon-drakitra naroson'ny SAMR, ny famokarana fiara mpandeha tamin'ny volana Jona dia nahitana fihenan'ny 3.8% isam-bolana mihoatra ny 4.7%.